Wadahadalada dibada wicitaanada dibadda ayaa ah kuwo mararka qaar faa’iido badan leh – gaar ahaan marka ir ka hadlaan shuruudaha farsamada ee lahjadda ajnabiga ah.
0.1 Waxa aan sameyeyey?
Waxa aan sameyeyey?
A2 mitināšana 3 – Jawaab degdeg ah, su’aalaheyga waxaa laga jawaabay si xirfad leh. Dhibaatada guud ee guud.
Arvixe 1 6 minūtes 28 sek Awood um lihin in ay gaarsiiyaan shaqaalaha taageerada iyagoo ku sheekeysanaya. Nidaamka ayaa codsaday in aan u diro email ahaan. Eeg sawirka-2 (hoos) oo tixraac ah.
BlueHost 1 2 min 2 sek Sheekada Live tiešraidē waa markii ugu horeysey ee lala xiriiro. Eeg sawirka-3 (hoos) oo tixraac ah.
Dot5 mitināšana 1 32 sek Sheekada Live tiešraidē waa markii ugu horeysey ee lala xiriiro. Sidoo kale, xusuusnow in dadka isticmaala ay u baahan yihiin inay galaan kahor intaanay helin caawimaada DreamHost taageerida sheekada.
DTS-NET 1 20 sek Jawaabta degdega ah – maaha mid aad ugu faraxsan taageerada aan helay. Waayo-aragnimo caadi ah.
ehost 2 11 sek Jawaab degdeg ah, su’aalaheyga waxaa laga jawaabay si xirfad leh. Dhibaatada guud ee guud.
Ej tēti 1 15 sek Ka heli karin badhanka wada sheekaysiga tooska ah goobta GoDaddy, laakiin waxay bixiyaan laba lambar oo maxalli ah (Malaysia) si ay u wacaan. Waxaan isku dayay mid ka mid ah lambarada nambarkeygana waxaa laga soo qabtay ilbidhiqsiyo 10. Nasiib darrose, dhibaatooyinkaygu waxay ahaayeen kuwo aan xallin ka dib daqiiqadihii 10 ee taleefanka. Shaqaalaha taakuleynta aad ugama aysan aqoonin vasks soo saarkooda; Aakhirkii waan ir taagay oo waan soo afjaray taleefanka.
GoGetSpace 1 10 sek Kaliya taageerada iibka ayaa laga heli karaa iyadoo la adeegsanayo chat live, laakiin shaqaalaha taageerada ayaa ahaa mid waxtar leh oo aqoon leh. Dhibaatada guud ee guud.
GreenGeeks 1 20 sek Jawaab degdeg ah, su’aalaheyga waxaa laga jawaabay si xirfad leh. Dhibaatada guud ee guud.
HostColor 1 8 minūtes 5 sek Waqti dheer oo sugitaan ah. HostColor wuxuu isticmaalaa Skype halkii uu ka heli lahaa nidaam wada-hadal ah oo toos ah. Isticmaalayaasha waxay u baahan yihiin inay ku daraan midabka Laambe ee Skype ka hor inta aan la xidhiidhin.
HostGator 4 4 min Awood um lihin in ay gaarsiiyaan shaqaalaha taageerada iyagoo ku sheekeysanaya. Nidaamka ayaa codsaday in aan u diro email ahaan. Eeg sawirka-4 (hoos) oo tixraac ah.
HostMonster 1 4 min 20 sek Wakhtiga jawaab celinta macquul ah, su’aalaha looga jawaabay xirfad ahaan. Guuda ahaan khibrad fiican.
iPage 1 1 min 10 sek Mudo yar ayaa loo qabtay si loo helo jawaab, laakiin shaqaalahooda taageeradoodu waa kuwo aad u fiican oo caawimaad leh. Guuda ahaan khibrad fiican.
Vietne 1 30 sek Jawaab degdeg ah, su’aalaheyga waxaa laga jawaabay si xirfad leh. Nidaamka taageerida sheekada wanaagsan (fiiri shaashadaha hoose) iyo shaqaalaha aadka u taageera. Dhibaatada guud ee guud.
WebHostFace 2 25 sek Jawaab degdeg ah, su’aalaheyga waxaa laga jawaabay si xirfad leh. Dhibaatada guud ee guud. Iyadoo la eegayo WebHostFace ir tas, ka dallacayso vasks ka yar $ 2 / mēn, shirkaddu waxay igu la yaabtay taageerada ir ku nool yihiin nolol fiican.
WP motors 2 2 sek Sanduuqa lagu sheekeysto ayaa soo baxaya ka dib marka la eego tirooyinka 3 waxaad ku jirtaa goobta. Waxaan jawaab degdeg ah ka helay sanduuqa lagu sheekeysto, su’aalahaygana waxaa laga jawaabay xirfad ahaan. Xasuusnow, kas ir kataba hahaatee, dadka isticmaala waxay u baahan yihiin inay galaan xisaabtooda WP Motor, ja jūs esat helaan taageero farsamo.
Vidū vidusmēra ah xubnaha shaqaalaha ee InMotion Hosting waxay arkeen arrin suurtagal ah oo la xidhiidha xisaabteyda (inaanan ogayn oo uu iska indho-tiray) inta lagu guda jiray fadhigeena wada-xaajoodka, waxaanan bilaabay dadaalka.
WP Motor waxay e-pasts tiek nosūtīts uz leju, lai uzzinātu, kā nokļūt vietnē xaliyay.
Iyo, shirkadaha qaar, waad dareemi kartaa inay si wanaagsan diyaar ugu yihiin soona dhoweynayaan weydiimaha tooska ah ee sheekada. Tusaale ahaan, badhanka wada sheekaysiga tooska ah waxaa laga heli karaa bogga ugu sarreeya bogagga shabakadda ‘BlueHost’. InMotion Hostings, WebHostFace, Host1Plus, HostPapa, Hostgator, Vietnes vidus.
Ka hor inta aanad dhicin vaska gunaanad ah, waxaa jira laba arrimood oo aad u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso:
Sheekada Live Live ir īstā kalija ee martigelinta shirkadaha bixiya taageerada maanta. Inta badan, dadka isticmaala waxay heli karaan taageerada iibka kadib e-pasts, telefons, iyo warbaahinta bulshada. Marka laga reebo GoDaddy kiiskan, ayaan weli isku dayin taageerada telefoonka ee tijaabadan.
Wixii A2 hostings – Tani waa waxa Lori ii sheegey ka dib markii ir akhristay oo edebtay my post
Waxaan isticmaalaa A2 Hosting oo marwalba email ayaan u diraa. Waligey dhibaato kamaan helin inay dib iigu soo laabtaan daqiiqado gudahood, laakiin waligey maan helin dhibaato ubaahan in badan oo gadaal iyo gadaal ah waxaan ubaahanahay wadahadal toos ah, sidaa darteed taasi waxay xiiso u laheyd.
1. attēls: Aanan awoodin inaan gaaro taageerada A2 Marti-gelinta iyada oo loo marayo wada-hadalka tooska ah waxaana lagula talinayaa in aan diro emayl bedel ahaan.
2. attēls: Ma jirin cid ka jawaabtay codsigeyga sheekeysiga ee B3. Guddiga wada hadalada ayaa i weydiiyay emailkayga.
3. attēls: BulwarkHost nidaamka sheekeysiga ku noolaanshaha ayaa ahaa xayiraad markii aan soo gaadhay.
4. attēls: Dhammaan waaxyaha HostMetro waa markii ugu horeysey ee lala xiriiro.